I-Jacuzzi Suite-Sofa-Desk-Fridge-HD Cable-1 GIG WiFi - I-Airbnb
I-Jacuzzi Suite-Sofa-Desk-Fridge-HD Cable-1 GIG WiFi
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Brian
Azikho izimali ezengeziwe-DELUXE PREMIUM BEDROOM & LIVING ROOM NOMUNTU 2 I-JACUZZI TUB-Ikhaya elikhulu lezitini endaweni enokuthula ethule (Benjamin Hills). Itholakala cishe imizuzu engu-8 ukusuka esikhumulweni sezindiza, imizuzu engu-7 ukusuka edolobheni kanye naseDolobheni Elidala, futhi ingaphansi kwemizuzu emi-5 ukusuka eZoo yethu ewine umklomelo.Iseduze nokugijima, ukugibela amabhayisikili nemizila yemvelo.Sinezinkukhu ezi-3 zasemuva kwendlu. Asisoze sabandlulula ngokohlanga, ubudala, ubulili, noma ukukhubazeka.AMAREYIDI AKHETHEKILE ATHOLAKALA IZIVAKASHI EZIVAME.
I-Basement Jacuzzi Suite ihlanganisa indawo yayo yokuhlala yangasese enosofa, isitulo, itafula lekhofi, namatafula okugcina anamalambu. Indawo yokulala ihlanganisa umbhede wosayizi wendlovukazi, umatilasi omusha onethezeke kakhulu kanye nemicamelo ethambile yoqalo, izindawo zokulala ezimbili ezinamalambu etafula eliseceleni kombhede, iwashi le-alamu, izimbobo zokushaja ze-USB nhlangothi zombili zombhede nedeski, ingubo yesibuko (konke akunalutho futhi isilungele ukusetshenziswa), ideski (elifakelwe isibani sedeski elicimayo, i-stapler, isikhiphi se-scotch-tape, amapeni, izinto ezigqamisayo nezinye izinto ezibalulekile zehhovisi), isihlalo sedeski esiguqukayo esiguqukayo, ithelevishini yesikrini esiyisicaba esingu-55” HD enentambo ye-premium HD (ene amaphakheji ezemidlalo & I-NFL Red Zone) kanye nesevisi ekhokhelwayo ye-Netflix enikeziwe, i-WiFi esheshayo engu-1000 Mbps (yebo 1 Gig ngomzuzwana), kanye nefeni. Ukufinyelela kuzo zonke izikhala ezivamile. I-ayina kanye nebhodi loku-ayina litholakala ekhabetheni lekamelo lokulala. Igumbi lokugezela linobhavu we-Jacuzzi wabantu abangu-2 one-Dimmable Lighting, ishawa ehlukene yabantu ababili, usinki wakhe nowakhe okabili. Umhlahlandlela wezivakashi ze-Wichita kanye nemephu kutholakala endaweni yegumbi lokuhlala le-suite. Lesi sikhala silungele ibhizinisi noma ukuzijabulisa kanye nokuhlala okufushane noma okude.
Umbhede omkhulu ongu-1, 1 usofa, omatilasi abangu- 2
4.85 out of 5 stars from 416 reviews
4.85 · 416 okushiwo abanye
Kutholwe amabhulokhi angu-3 ukusuka ku-25th Street ophumayo ku-I-235 endaweni yase-upscale Benjamin Hills (enyakatho-ntshonalanga ye-Wichita). Kutholwe cishe imizuzu eyi-7 ukusuka esikhumulweni sezindiza, imizuzu eyi-8 ukuya edolobheni nedolobha elidala futhi ngaphansi kwemayela ukusuka ezindaweni zokudlela eziningi.
Ngizokwenza njalo ngitholakalele imibuzo nezincomo ngezindawo zokudlela, ukubuka indawo, njll.